Ndị Izrel si n’Ugwu Horeb pụọ (1-8)
A họpụtara ndị isi na ndị ikpe (9-18)
Ndị Izrel nupụrụ isi na Kedesh-bania (19-46)
Ha ekweghị abanye n’ala ahụ (26-33)
Ha emerighị ndị Kenan (41-46)
1 Ihe a bụ okwu Mosis gwara ndị Izrel niile ná mpaghara Osimiri Jọdan nke dị n’ala ịkpa, n’ọzara dị n’ihu Sọf, n’agbata Peran, Tofel, Leban, Hazirọt, na Daịzahab. 2 Ọ na-ewe ụbọchị iri na otu isi na Horeb ruo Kedesh-bania,+ ma e si n’ụzọ Ugwu Sia gawa ya. 3 N’afọ nke iri anọ,+ n’abalị mbụ n’ọnwa nke iri na otu, Mosis gwara ndị Izrel ihe niile Jehova gwara ya ka ọ gwa ha. 4 Ihe a bụ n’oge o merichara Saịhọn+ eze ndị Amọraịt, onye bi na Heshbọn, nakwa Ọg+ eze Beshan, onye bi n’Ashtarọt, n’Edraị.+ 5 Mosis malitere ịkọwa Iwu a+ ná mpaghara Osimiri Jọdan nke dị na Moab. Ọ sịrị: 6 “Jehova bụ́ Chineke anyị gwara anyị okwu na Horeb, sị, ‘Unu ebiteela aka n’ebe a bụ́ ugwu ugwu.+ 7 Tụgharịanụ gawa n’ala ndị Amọraịt bụ́ ugwu ugwu+ nakwa obodo niile ha na ha gbara agbata obi n’Araba,+ bụ́ ebe ugwu, ya bụ, Shefila, Negeb,* na ala dị n’ụsọ oké osimiri,+ bụ́ ala ndị Kenan, nakwa Lebanọn,*+ ruo ná nnukwu osimiri, bụ́ osimiri Yufretis.+ 8 Lee, edowerela m unu ala ahụ. Banyenụ weghara ala ahụ Jehova ṅụụrụ nna nna unu hà, bụ́ Ebreham, Aịzik,+ na Jekọb,+ iyi na ọ ga-enye ha na ụmụ* ha ndị ga-anọchi ha.’+ 9 “M gwakwara unu n’oge ahụ, sị, ‘Naanị m agaghị enwe ike idu unu.+ 10 Jehova bụ́ Chineke unu emeela ka unu mụbaa. Taa, unu dịzi ọtụtụ ka kpakpando ndị dị n’eluigwe.+ 11 Ka Jehova, bụ́ Chineke nna nna unu hà, mee ka unu mụbakwuo+ okpukpu otu puku karịa ole unu dị, ka ọ gọziekwa unu otú o kwere unu ná nkwa.+ 12 Olee otú naanị m ga-esi buru ibu unu na nsogbu unu na okwu na ụka unu?+ 13 Sinụ n’ebo unu niile họpụta ụmụ nwoke ma ihe, ndị nwere uche, na ndị ma nke a na-akọ. M ga-eme ha ndị isi unu.’+ 14 Unu gwara m, sị, ‘Ihe ị gwara anyị mee dị mma.’ 15 M wee kpọọ ndị isi ebo unu niile, bụ́ ụmụ nwoke ma ihe, ndị makwa nke a na-akọ. M mere ha ndị isi unu, ya bụ, ndị isi otu puku otu puku mmadụ, ndị isi otu narị otu narị mmadụ, ndị isi mmadụ iri ise mmadụ iri ise, ndị isi mmadụ iri mmadụ iri, nakwa ndị ọzọ bụ́ ndị isi n’ebo unu.+ 16 “N’oge ahụ, m gwara ndị ikpe unu, sị, ‘Mgbe unu na-ekpere ụmụnne unu ikpe, kpeenụ ikpe ziri ezi+ n’etiti mmadụ na nwanne ya ma ọ bụ onye mbịarambịa.+ 17 Unu elela mmadụ anya n’ihu mgbe unu na-ekpe ikpe.+ Unu ga-ege ma onye ukwu ma onye nta ntị.+ Unu atụla mmadụ egwu+ n’ihi na ọ bụ Chineke ka unu na-ekpere ikpe.+ E nwee ikpe siiri unu oké ike, unu ga-ewetara m ya, m ga-elebakwa ya anya.’+ 18 N’oge ahụ, m nyere unu ntụziaka banyere ihe niile unu ga-eme. 19 “Anyị sizi na Horeb pụọ, si ná nnukwu ala ịkpa niile na-atụ ụjọ gafee,+ otú Jehova bụ́ Chineke anyị nyere anyị n’iwu, ya bụ, ala ịkpa unu hụrụ n’ụzọ e si aga n’ala ndị Amọraịt bụ́ ugwu ugwu.+ Anyị mechaziri bịarute Kedesh-bania.+ 20 M wee sị unu, ‘Unu abịarutela n’ala ndị Amọraịt bụ́ ugwu ugwu, nke Jehova bụ́ Chineke anyị na-enye anyị. 21 Lee, Jehova bụ́ Chineke unu enyefeela unu ala a. Gbagoonụ weghara ya, otú Jehova bụ́ Chineke nna nna unu hà gwara unu.+ Unu atụla egwu, unu atụkwala ụjọ.’ 22 “Ma, unu niile bịakwutere m, sị, ‘Ka anyị ziga ụmụ nwoke ka ha buru ụzọ gaa nyopụta otú ala ahụ dị, bịazie kọọrọ anyị ụzọ anyị ga-esi nakwa ụdị obodo ndị anyị ga-ahụ.’+ 23 Ihe ahụ unu kwuru dị m mma. N’ihi ya, m họpụtara ụmụ nwoke iri na abụọ n’ime unu, otu onye n’ebo nke ọ bụla.+ 24 Ha gawara, gbagoo n’ebe bụ́ ugwu ugwu+ ma ruo na Ndagwurugwu Eshkọl. Ha wee nyopụta otú ọ dị. 25 Ha buuru ụfọdụ n’ime mkpụrụ dị n’ala ahụ butere anyị. Ha kọkwaara anyị, sị, ‘Ala Jehova bụ́ Chineke anyị na-enye anyị dị mma.’+ 26 Ma unu ekweghị agbago, unu nupụkwara isi n’iwu Jehova bụ́ Chineke unu nyere.+ 27 Unu nọ n’ụlọikwuu unu na-atamu ntamu, sị, ‘Ọ bụ maka na Jehova kpọrọ anyị asị mere o ji kpọpụta anyị n’Ijipt ka o nyefee anyị n’aka ndị Amọraịt ka ha laa anyị n’iyi. 28 Olee ụdị ebe anyị na-aga? Ụmụnne anyị mere ka obi mapụ anyị.*+ Ha sịrị: “Ndị bi n’ebe ahụ dị ukwuu ma too ogologo karịa anyị. Obodo ha dị ukwuu, a rụsikwara ha ike ruo n’eluigwe.*+ Anyị hụkwara ndị Anakim+ n’ebe ahụ.”’ 29 “M wee sị unu, ‘Unu atụla ụjọ, unu atụkwala egwu n’ihi ha.+ 30 Jehova bụ́ Chineke unu na-ebutere unu ụzọ. Ọ ga-alụkwara unu agha+ otú o mere n’Ijipt n’ihu unu.+ 31 Unu hụkwara n’ala ịkpa otú Jehova bụ́ Chineke unu si kuru unu n’ebe niile unu gara, otú nwoke si eku nwa ya nwoke, ruo mgbe unu rutere ebe a.’ 32 Ma n’agbanyeghị ihe a niile, unu enweghị okwukwe na Jehova bụ́ Chineke unu,+ 33 onye na-ebutere unu ụzọ ka ọ chọtara unu ebe unu ga-ama ụlọikwuu. O ji ọkụ duo unu n’abalị, jirikwa ígwé ojii duo unu n’ehihie ka o wee gosi unu ụzọ unu kwesịrị iso.+ 34 “N’oge ahụ niile, Jehova nụrụ ihe unu na-ekwu. Iwe wee wee ya, ya aṅụọ iyi, sị,+ 35 ‘E nweghị otu onye n’ime ụmụ nwoke so n’ọgbọ ọjọọ a ga-ahụ ezigbo ala ahụ m ṅụrụ iyi na m ga-enye nna nna unu hà,+ 36 ma e wepụ Keleb nwa Jefune. Ọ ga-ahụ ya. M ga-enyekwa ya na ụmụ ya ala ahụ ọ gara na ya n’ihi na o ji obi ya niile soro Jehova.+ 37 (Jehova wesadịrị m iwe n’ihi unu. Ọ sịrị m, “Gịnwa agaghịkwa abanye n’ebe ahụ.+ 38 Ọ bụ Joshụa nwa Nọn, onye na-ejere gị ozi,*+ ga-abanye n’ala ahụ.’+ Mee ka ọ dị ike+ n’ihi na ọ bụ ya ga-eduru ndị Izrel banye n’ala ahụ ka ha nweta ya.”) 39 Ọ bụ ụmụaka unu, ndị unu kwuru na a ga-achịkọrọ+ na ụmụ unu ndị nwoke ndị na-amaghị ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ taa, ga-abanye n’ebe ahụ. Ọ bụkwa ha ka m ga-enye ya ka ha biri na ya.+ 40 Ma ununwa, tụgharịanụ soro ụzọ Oké Osimiri Uhie gawa n’ala ịkpa.’+ 41 “Unu wee sị m, ‘Anyị emehiela Jehova. Anyị ga-agbago n’ugwu ahụ gaa lụọ ọgụ otú Jehova bụ́ Chineke anyị nyere anyị n’iwu.’ Onye ọ bụla n’ime unu wee kere ngwá agha ya. Unu chekwara na ịgbago n’ugwu ahụ dị mfe.+ 42 Ma Jehova sịrị m, ‘Gwa ha, sị: “Unu agbagola ịlụ agha n’ihi na agaghị m anọnyere unu.+ Ọ bụrụ na unu agbagoo, ndị iro unu ga-emeri unu.”’ 43 M gwara unu ihe a, ma unu egeghị ntị. Kama unu nupụrụ isi n’iwu Jehova nyere. Unu gbalịkwara ka unu gbagoo n’ugwu ahụ maka na unu dị mpako. 44 Ndị Amọraịt, bụ́ ndị bi n’ugwu ahụ, wee pụta ịlụso unu agha. Ha chụwara unu ọsọ ka aṅụ. Ha chụsasịkwara unu ruo Sia, ruokwa Họma. 45 Unu wee lọta bewe ákwá n’ihu Jehova. Ma Jehova egeghị unu ntị, ọ tụpụrụghị unu ọnụ. 46 Ọ bụ ya mere unu ji biri na Kedesh ruo ọtụtụ ụbọchị ahụ unu biri na ya.
^ Ọ ga-abụ ugwu ndị dị na Lebanọn ka a na-ekwu.
^ Ya bụ, obodo ndị mgbidi ha dị ezigbo elu.
^ Na Hibru, “onye na-eguzo n’ihu gị.”